Macalinka PSG Oo Mar Kale Si Aan La Filayn Uga Hadlay Hadii Real Ay Xiiso U Qabto Neymar & Hadii Uu Aadayo %
Iyadoo ay wali soo socdaan sheekooyinka leysla dhexmarayo ee ku aadan in Neymar, ay Real Madrid, xiiseyso, islamarkaana uu Paris Saint-Germain, joogi doonin xili ciyaraeedka dambe, ayaa waxaa mar kale wax laga weydiiyay macalin Unia Emery.
Unai Emery, hogaamiyaha PSG ayaa wuxuu ku nuux-nuux saday in sheekooyinkaas ay yihiin kuwa ay fiicnaan lahayd in la weydiiyo madaxda naadiga reer Spain ee Real Madrid, maadaama sida uu sheegay uu marar badan ka jawaabay wararkaas.
“Waxaan umaleynayaa inaan ka jawaabay su’aalaha mawduucaan ku saabsan wax ka badan 30 jeer oo ah shirka jaraa’id iigu weydiiseen,” ayuu sheegay macalin Emery shalay oo Jimco ahayd, xili uu warbaahinta la hadlayey.
“Mashruuca PSG, waa in Neymar, uu wax badan nala joogo, waana inuu aad noo xoojiyo,” ayuu hadalkiisa ku daray macalinkii hore ee kooxda kubada Sevilla, taasoo hada wareega Sideed dhamaadka Champions League, ku wajahayso Bayern Munich.
“Hadii aad dooneyso akhbaar ku saabsan Real [Hadii ay doonayaa Neymar iyo in kale] waxaa fiicnaan lahayd inaad weydiiso Florentino [Madaxweynaha Real Madrid] maxaa yeelay aniga waxba kama ogi,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Sikastaba, hadalka kasoo yeeray Unai Emery tababaraha PSG, ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo la sheegayo in Madaxweynaha Los Blancos uu la kulmay Aabaha Neymar, kaasoo sidoo kale ah Wakiilkiisa, islamarkana uu kala hadlay arrimo wiilkiisa quseeya.